Giovanni Battista Belzoni (Talyaaniga: [dʒovanni battista beltsoːni]; 5 Nofembar 1778 - 3 Diseembar 1823), mararka qaarkood loo yaqaano Great Belzoni, wuxuu ahaa baadhitaan talyaani ah oo hore u ahaa taariikhdii hore ee talyaaniga iyo taariikhdii hore ee Masar. Waxaa loo yaqaanaa in laga saaro England oo ka mid ah todobo ton oo buste ah oo Ramesses II ah, ka soo cidhib tirka ciidda ka soo galaya macbadka weyn ee Abu Simbel, helitaanka iyo dukumintiga xabadka of Seti I (mararka qaarkoodna loo yaqaan "Gobalka Belzoni "), iyo kan ugu horreeya ee galka galay Giraankii labaad ee Giza.
Belzoni wuxuu ku dhashay Padua. Aabihiis wuxuu ahaa xannibaad afar sano jir ah. Qoyskiisa wuxuu ka yimid Rome iyo markii Belzoni uu ahaa 16 jir inuu halkaas ka shaqeeyo, isaga oo sheegay in uu wax ka bartay hydraulics. Wuxuu ujeedkiisu ahaa inuu qaato naqshado fara badan, laakiin sannadkii 1798-kii magaalada oo ay qabsadeen ciidamada Faransiiska ayaa ka riday magaalada Rome oo badalay xirfadiisii ​​la soo jeediyay. Sanadkii 1800 wuxuu u soo guuray wadanka Holland halkaas oo uu ku noolaa sidii barbaro. Sannadkii 1803 ayuu u cararay England si looga fogaado in xabsiga la dhigo.  Halkaasi wuxuu guursaday qof Ingiriis ah, Sarah Bane. Belzoni wuxuu ahaa nin dheer oo dhererkiisu yahay 6 feet 7 inches (2.01 m) (ilo ayaa sheegay in xaaskiisa ay ka timid dhismo isku mid ah, laakiin xisaabteeda kale ee iyada ku sharraxaysa iyada oo ah mid caadi ah) waxayna labadooduba ku biireen wareegga socdaalka.  Waxay ahaayeen waqti ay qasab ku noqotay in ay raadsadaan hibo ayagoo bandhigaya bandhigyo muuqaal ah oo xoog leh iyo dhaqdhaqaaq ahaan sida xoogga ah ee madadaalada iyo waddooyinka London. Sannadkii 1804 waxa uu u muuqday inuu ku dhexjiray wareegga Astley's amphitheatre waxqabadyo kala duwan.  Belzoni wuxuu xiiso u qabay phantasmagoria wuxuuna tijaabiyey isticmaalka faan-celin caan ah bandhigiisa.
Maqaal ka mid ah sawirada Belzoni oo uu sameeyay William Brockedon ayaa waxaa lagu magacaabay Sir Edward Thomason 1821. Saaxiibkii Belzoni Sir Francis Ronalds wuxuu soo bandhigay farshaxan iyo mawduuc. Sannado ka dib, sannadkii 1859kii Padua, Ronalds wuxuu kula taliyay sawirqaade Rinaldo Rinaldi inuu ka qeyb galo tartankii weynaa ee uu u sameynaayay xusuusin Belzoni oo ka tirsanaa dhulkiisa.  Belzoni waxaa lagu sawiray Matthew Kelly sanadkii 2005 ee BBC. Alberto Siliotti wuxuu sameeyey qoraalka aqooneed ee gaarka ah ee safarkiisa waxaana uu ahaa mawduuca Horus dijitalka 1988. Horace Smith, gabay ku jirta wareegga Percy Bysshe Shelley, ayaa qoray "Cinwaanka Mammuuriga ee Belzoni 'Exhibition.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Battista_Belzoni&oldid=188101"
Last edited on 19 Diseembar 2018, at 15:46
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Diseembar 2018, marka ee eheed 15:46.